Nifarana ny volana Ramadany, nankalaza izany ireo Malagasy monina eto Egypta – Gasy Egypte
“Ny zoma 15 jona lasa teo no nifarana ny volana masina Ramadany ary ny fankalazan’izany dia mendrika fety izay fantatry ny maro amin’ny “EID AL-FITR”. Naresaka ny herinandro lasa teo ho an’ireo Malagasy monina eto Egypta nohon’ny fanomanana io fety io.”
Mandritra ny volana Ramadany moa dia mifady hanina ny mpino silamo, fomba izay tafiditra ao anatin’ny “cinq (5) piliers de l’islam” izy ity. Vao miposaka ny masoandro dia misy famantarana ho fanombohan’ny fifadin-kanina (sady tsy mahazo mihinana no tsy misotro), ary dia toy izany ihany koa rehefa milentika ny masoandro izay midika fa mifarana ny fifadin-kanina. Mifehi-tena ny mpino tsirairay mba hahafahany mametraka ho eo amin’ny voalohan-daharana ny fifandraisana amin’Andriamanitra indrindra amin’ny alalan’ny vavaka.
Ny herinandro farany tamin’ny volana Ramadany dia niara-nanapaka ny fifadin-kanina isan-kariva ny Malagasy teto Egypta na ilay antsoina hoe “Iftar”. Ny atao amin’izany dia: miandry ny antso famantarana fa milentika ny masoandro, miaraka mivavaka ary miara-misakafo avy eo. Izany dia natao tao amin’ny “Makar” na ilay trano iombonan’ny Malagasy rehetra eto Egypta. Niandraiketan’ny fikambanana avokoa ny fikarakarana rehetra, nampian’ireo Malagasy maro izay nanana ny finiavana sy fandava-tena nanampy betsaka tamin’izany ka mendrika fankasitrahana manokana nohon’ny ezaka sy fanampiana natolotr’izy ireo.
Tonga ny zoma 15 jona, tapitra ny Iftar isan-kariva koa dia mivadika ho fiaraha-misakafo maraina indray izany io andro io. Mandeha mamonjy ny famoriana amin’ny fotoam-pivavahana ny rehetra toy ireny lamesa krismasy ireny no azo anoharana azy. Mitohy izany avy eo ka mifampiarahaba ny rehetra ary ny firarian-tsoa ny marainan’ny zoma dia ny fiarahabana nahavita soamantsara ny volana Ramadany, mirary ny valim-bavaka rehetra ho to sy ho tanteraka, ary ny ho ela velona mba hiaina ny fitahiana rehetra avy amin’Andriamanitra.
Ny Asabotsy tolak’andro dia lalao baolina ara-pirahalahina indray no niarahan’ny rehetra tao amin’ny kianja iray izay efa mahazatra ny Malagasy aty an-toerana ny milalao baolina kitra ao na ihany koa manao fanazara-tena. Tena niavaka ary nahafinaritra tamin’ity taona ity ny fandraisan’ireo vehivavy Malagasy anjara tamin’izany lalao izany. Hita tamin’izany fa navitrika tokoa izy ireo ary afa-po tamin’ny lalao nandritry ny iray ora tsy niato. Manam-pikasana mihintsy aza ny hanohy ny fanazara-tena sy ahafahana manangana ekipa (FC – Football Club) ho an’ny vehivavy manokana izay hevitra tena tsara hampandroso ny firaisan-kina misy eo amin’ny samy Malagasy.
Ny fankalazana dia nifarana ny Alahady 17 jona tao amin’ny “Makar”, fiarahana mifaly sy miravoravo ho an’ny rehetra no natao tamin’izany.
Nizotra tao anatin’ny filaminana, firahalahina ary indrindra moa fa ny firaisan-kina nohon’ny fihavanana misy eo amin’ny samy Malagasy ny fankalazana ny Eid teto Egypta. Tsara ny manamarika fa tsy ireo mpino silamo ihany no niara-nifety fa ireo Malagasy rehetra mihintsy no nahazo anjara tamin’izao fankalazana ka niara-nizara ny hafaliana ny rehetra. Ilay fiarahana sy firaisan-kina no tena zava-dehibe ka tontosa avokoa ireo rehetra nokasaina.
4 Thoughts to “Nifarana ny volana Ramadany, nankalaza izany ireo Malagasy monina eto Egypta”
Purchase Tamoxifen Citrate Online Buy Professional Viagra On Line buy cheap generic levitra online Pharmacie Priligy Antidotes To Cephalexin
Zithromax Label Proscar Cabello Propecia Achat Ciprofloxacin En Ligne Belgique online pharmacy Keflex And Clotrimazole Nolvadex For Sale Uk
Allergic Reactions To Keflex Cialis Experiencia Dove Comprare Viagra cialis prices Cipa Approved Pharmacy Canada Amoxicillin For Toddlers
Flucoanazole For Ear Infestations Peor Hora Para Tomar Propecia order cialis online Suhagra Cipla Amoxicillin Without Forum Ou Acheter Du Viagra